Shanta Goobood Ee Adduunka Ugu Kulul Iyo Shanta Goobood Ee Adduunka Ugu Qabaw, Darajada Heer-kulkooda Iyo Dalalka Ay Ku Yaallaan - Wargane News
Home Entertainment & Lifestyle Shanta Goobood Ee Adduunka Ugu Kulul Iyo Shanta Goobood Ee Adduunka Ugu...
Wakhti dunidu maalinba maalinta ka dambaysa sii kululaanayso cimilo ahaan, khubarada deegaankuna mar walba ka hadlayaa in adduunku sii kululaanayo wakhtiganna aynu ku jirno wakhtigii kulaylaha ee xagaaga waxa aan qormadan kooban ku eegi doonaa shanta goobood ee adduunka ugu kulul iyo shanta goobood ee qabaw, halka ay ku yaallaan iyo macluumaad la xidhiidha. Dalal badan oo qabaw lagu yaqaanay ayaa kulayl badani ku dhufanayaa halka kuwo kale oo kulayl ahaan jiray ay qabaw kooban noqdeen. 29-kii Bishii June ee aan soo dhaafnay dalka Iiraan waxa laga diiwaan geliyey kulaylkii ugu darnaa ee abid ka dhaca dalkaasi iyada oo darajada heer kulku gaadhay magaalada Al-Ahwaaz ee galbeedka Iiraan in ka badan 54-darajo ee sentigaraydh ah, taasi oo keentay in xataa dhagaxaantu madaw noqdaan dad badana ku dhinteen.
Qormadan oo wargeyska Foore idiin soo turjumay waxa ay daaha ka rogaysaa daraasad laga sameeyey 10-ka meelood ama goobood ee adduunka ugu kulul uguna qabaw oo mid kasta shan goobood laga soo qaatay. Tusaale ahaan shanta goobood ee ugu kulul iyo shanta goobood ee ugu qabaw iyada oo cimilada adduunku si weyn isu badashay cilmi-baadhayaasha deegaankuna sheegaan in maalinba maalinta ka dambaysa adduunku sii kululaanayo. Sida ay ku soo warramayso shabakadda Half Post ee caanka ahi, shantan goobood ayaa loo aqoonsaday kuwa adduunka ugu kulul waxaanay kala yihiin:
1. Al-ahwaaz oo ku taalla waddanka Iiraan waxa heer-kulkeedu gaadhay 54 darajo
2. Madraba – Deegaan ku yaalla waddanka Kuwayt oo heer-kulkeedu Bishan gaadhay 54 darajo
3. Dead Valley- California oo Maraykanka ah waxaanu heerkulkeedu gaadhay 54.
4. Basra oo Ciraaq ah waxaanay darajada heer-kulkeedu gaadhay 53.9.
5. Al-saliilbiya oo dalka Kuwayt ah waxaanay darajada heer-kulkeedu gaadhay 53.6.
Shanta Goobood Ee Adduunka Ugu Qabaw:
1. Bariga Qaaradda Barafka Ah: (East Antarctica) waxaanu heerka qabawgu gaadhay 94 oo ka hoose heerka biyuhu ku barafooobaan ee zero.
2. Fostog oo Ruushka ah waxa heerka qabawgu hoos ka maray 89-darajo oo heerka eber ah.
3. Amundsen oo Scotland ah waxa heerka qabawgu hoos ka maray 82 oo ka hoosaysa heerka biyuhu ku barafoobaan ee eberka ah.
4. Figta Argues oo ku taalla cidhifka kulaalaha koonfureed waxaanu heerkeedu gaadhay 81.
5. Ayumyakon oo Ruushka ku taalla waxaanu heerkeedu gaadhay 67-darajo oo ka hoose heerka eber ee biyuhu ku barafoobaan.